Ashley Young: “Waxay ahayd guul cajiib ah”
HomeWararka MaantaAshley Young: “Waxay ahayd guul cajiib ah”
Ciyaaryahanka baasha uga ciyaara kooxda Manchester United ee Ashley Young ayaa xejin waayay sida uu ula dhacay isla markaana farxadu u noqotay mid madax marta kadib markii ay guul weyn ka gaadheen ciyaartii derbiga ahayd ee Manchester oo ay City ku dubteen geggida Old Trafford.
United ayaa gool lagaga naxsaday bilowgii ciyaartaba kaas oo uu saxeexay Sergio Aguero, laakiin dagaal ay soo qaadeen kadib waxaa u suurto gashay in Young uu shabaqa ruxo ka hor intii aanu Marouane Fellaini kooxda tababare Louis van Gaal u dhalinin goolkii hogaanka qaybtii hore ee ciyaarta ay ku gacan sareeyeen.
Qaybtii dambe markii la isugu soo noqday, naadiga lagu naanayso Red Devils ayaa la wareegay gacan ku hayntii maamulka ciyaarta, waxaanay u suurto gashay in xidigaha Juan Mata iyo Chris Smalling ay kulanka ka dhigaan mid u muuqda mid ka fog City inay guul hiigsan karto, wallow uu xilli dambe gool labaad u soo dhiciyey Aguero.
Young ayaa ku yidhi warfidiyaha Sky Sports News ciyaarta kadib hadalkan: “Maanta waxay ahayd guul aad qaali u ah ta aanu gaadhnay. Waanu ogeyn inay naga go’an tahay inaanu saddexda dhibcood qaadano, waxa kale oo aanu maanka ku haynay inay nagu adkaan doonto taasi ciyaartu mid kakan noqon doonto.
“Woxogaa waanu niyad jabnay markii goolka koobaad nalagaga horeeyey, Laakiin waxaanu muujinay dhaqanka iyo awooda qarsoon ee naadigayaga ee ah inaanu dib u soo kaban karno ciyaarta.”
United ayaa u ruqaan satay boos ay 4 dhibcood oo nadiif ah ka saray City kala horeynta hogaanka horyaalka oo ay kaalinta saddexaad kaga jirto.
Benzema Oo Laga Reebay Ciyaarta Paris Saint-Germain
Wakhtiga iyo dhamaan kulamada Manchester City ee Xili ciyaareedka 2017/18
14/06/2017 Abdiwahab Ahmed
Simeone Oo Ku Dhawaaqay Inuu Atletico Madrid La Sii Joogayo Xili Ciyaareedka Dambe
21/05/2017 Abdiwahab Ahmed